Achịcha achịcha Brownie nwere dulce de leche na pawuda | Bezzia
Maria onyekwere | 12/10/2021 10:00 | Postres
Taa, anyị na -akpọ gị oku ka ị kwadebe ụtọ na -enweghị atụ na Bezzia. A cheesecake brownie nwere dulce de leche na pawuda ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, ihe eji megharịa ọnụ nwere akwa brownie na cheesecake ọzọ ejiri dulce de leche na cinnamon tinye. Bọmbụ!
Ọ bụghị ihe eji megharịa ọnụ, n'ezie. Mana ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgwọ onwe gị ihe ụtọ, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ nnukwu nhọrọ. Ime nke a agaghịkwa ewe oge, ị gaghịkwa achọ ọtụtụ arịa maka ya; Ngwakọta ihe, ọkwá ole na ole iji jikọta ihe eji eme ya na ịkpụ 20 × 20 cm ga -ezu.
Ị nwere ike mechaa ụtọ a ka masịrị gị. Anyị agbakwunyere caramel na cinnamon mana ị nwere ike ime na -enweghị ihe ndị a wee nweta nke ahụ mmetụta gharịị naanị ya na achịcha brownie. Ma ọ bụ ị nwere ike hapụ mmetụta ahụ mara mma ma tinye mkpụrụ. Ihe dị mkpa, gafere ụdị ndị ị na -ewebata, bụ na ị preobéis!
245 g. ọchịchịrị chocolate
185 g. nke bọta
3 àkwá L
155 g. agba aja aja
1 Teaspoon vanilla wepụ
125 g. Nke ntụ ọka
225 g. chiiz chiiz
60 g. ọcha shuga
1/2 teaspoon nke vanilla kachasi mkpa
Iji icho mma
Pawuda ntụ ntụ
Malite site na ịkwadebe brownie. Maka ya gbazee chocolate na butter na nnukwu efere ka ikuku ikuku microwave. Kpoo ọkụ maka sekọnd 30 n'ike kachasị, kpalie ma nọgide na -ekpo ọkụ n'ọkụ nke sekọnd 20 ruo mgbe agbazere chocolate nke ọma.
Emechaa tie aka na akwa na -etinyeghị oke ikuku n'ime ngwakọta.
Ozugbo ịma jijiji gbakwunye shuga na vanilla wee jikọta ya na mkpara.
Mgbe ah tinye ngwakọta chocolate na bọta nke nta nke nta ma kwụsị ịkwụsị.
N'ikpeazụ, gbakwunye ntụ ọka na nnu ma gwakọta ruo mgbe agwakọtara ya.
Wunye batter brownie n'ime ebu Ejiri 20 × 20 cm kpuchie ya na akwụkwọ tere mmanụ, na -edobe ntụ ọka atọ n'ime iko. Mee ka elu ya dị larịị.
Kpochapu oven na 180ºC
Ugbu a kwadebe cheesecake. Iji mee nke a, tie cheese chiiz maka nkeji abụọ. Mgbe ahụ gbakwunye ihe ndị ọzọ fọdụrụ ma tie ọzọ ruo mgbe agwakọtara ya.
Wunye mpekere cheesecake banyere brownie.
Ugbu a, dobe batter brownie echekwara na obere ihe ọdịdị na -adịghị mma dulce de leche ebe a na ebe a. Mgbe ahụ fesaa ntakịrị pawuda.
Were mma ma ọ bụ osisi skewer na mepụta eserese na oyi akwa cheesecake.
N'ikpeazụ, Ime maka 40 nkeji.
Ozugbo emere ya, ka caramel na cinnamon brownie cheesecake dị jụụ nụrụ ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ntụziaka » Postres » Achịcha brownie nwere dulce de leche na cinnamon